ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ | Y-Max Technologies Co.,Ltd
1. Master of Business Administration ( MBA )
Master of Business Administration (MBA) ဆိုတာ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ MBA က Academic သီးသန့် မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ ကျင့်သုံး တဲ့သူတွေအတွက် Professional ဘွဲ့ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်မှု ခရီးလမ်းကို အောင်မြင်စွာ လျှောက်လမ်း နိုင်ဖို့ အထောက်အပံ့ အပြည့်အဝ ပေးနိုင်မည့် MBA Program တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မလေးရှား နိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့် ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ပေးအပ် ချီးမြှင့်သော "5-Star 2017" Excellent Award ရ မလေးရှားနိုင်ငံ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့် Lincoln University မှ တိုက်ရိုက် ချီးမြှင့် ပေးအပ်သည့် MBA ဘွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရပ် (၁၁) ခု သင်ကြားရမည် ဖြစ်ပြီး စာသင်ကြားမှုမှာ (၁၂)လကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Thesis ပြုလုပ်ရန်အတွက် အချိန် (၃) လခန့် ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘာသာလျှင် နာရီပေါင်း (၃၀) သင်ကြားရမှာဖြစ်ပြီး နာရီစုစုပေါင်း (၃၃၀)ကျော် သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခု MBA Program အား နိုင်ငံတကာမှ MBA/Ph.D ဘွဲ့ရရှိထားပြီး လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သော ဆရာ/ဆရာမ များမှ ထိရောက်သော Case Study များဖြင့် လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးချနိုင်စေရန် သင်ကြားပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Academic Board အနေဖြင့်အချိန်ပြည့် ကြီးကြပ်မှု ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး မိမိ သိချင်သော အကြောင်းအရာများအား တိုက်ရိုက် မေးမြန်း ဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Day Sunday Only
Class Time 09:00 AM to 4:00 PM
Duration 1 Year+3Months (Thesis)
MBA (Master of Business Administration) တွင် သင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ်များ
Malaysian Qualifications Agency (MQA) Subject Code
(ACC501) Business Accounting & Finance
(ECO501) Business Economics
(HRM501) Human Resource Management
(ORG501) Organizational Behavior
(MGT505) International Business
(MGT503) Business Ethics & Governance
(MGT506) Operations Management
(MKT501) Marketing Management
(MGT505) Strategic Management
(MGT507) Research Methodology
(MGT508) Project Paper/Thesis
MBA ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများ အတွက် နောက်ထပ် ရွေးချယ်စရာ ခြေလှမ်းသစ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းကို ပိုမို တိုးတက်အောင် စီမံခန့်ခွဲ နိုင်စေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို အဆင့်မြင့် လေ့လာ သင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Ph.D in Management စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့ ပြီးဆုံးပါက Lincoln University College, Malaysia နိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက်ဘွဲ့ တက်ရောက် ရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် YMC မှ5Stars အဆင့်ရှိ Hotel တွင်ကျင်းပပြုလုပ် ပေးမည့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကိုလည်း တက်ရောက်ရယူ နိုင်ပါသည်။
Ph.D in Management သည် ပညာရေး နယ်ပယ်တွင် အမြင့်မားဆုံး အဆင့် ဖြစ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ အစိုးရ၏ အဆင့်မြင့် ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ် ပြုထားသော Lincoln University College နှင့် YMC တို့ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်၍ ပို့ချခွင့် ရရှိသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် များစွာ ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေ၊
စာသင် ကြားရေး လုပ်နေတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊
မိမိ လုပ်ငန်းခွင်မှာ စီမံခန့်ခွဲမှု ရာထူးယူထား သူတွေ၊
မဟာ ဗျူဟာမြောက် စီးပွားရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ် တွေကို လေ့လာလိုသူတွေ၊
International Business Management, Organization Development, Human Resource Management, Marketing Management, Entrepreneurial Management, Public Relations Management အကြောင်းတွေကို ပိုမို အသေးစိတ် သိရှိလိုသူ တွေ တက်ရောက် လေ့လာသင့်ပါသည်။
သင်တန်းကာလ ဘယ်လောက် ကြာမှာလဲ?
သင်တန်း ကာလကတော့ (၃) နှစ်ကြာ တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။၊
ပုံမှန်အားဖြင့် ရုံးချိန်လွတ်တဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ph.D မှာသင်ကြားရမယ့် ဘာသာရပ်များ
PHD in Research Work
Research work on Accounts and Finance Management
Research work on Tourism Management
Research work on Business Law Management
Research work on Medico Legal Management
Research work on Criminal Justice Management
Research work on Hospitality Management
Research work on Medical Ethics Management
Research work on Socioeconomic Management
Research work on Media and Publications Management
Research work on Entrepreneurial Management
Research work on Operational and Technology Management
Research work on Corporate strategic Management
Research work on Logistics and Supply Chain Management
Research work on Health Informatics Management
Research work on Health Care Management
Research work on Agriculture Management
Research work on Political Development Management
Research work on Marketing Management
Research work on International Business Management
Research work on Public Relations Management)